ANTOKO POLITIKA “maeva”: “Mitsangàna, mihazavà fa tonga ny fahazavanao” | Madatopinfo
ANTOKO POLITIKA “maeva”: “Mitsangàna, mihazavà fa tonga ny fahazavanao”
MAMY RAHARIMANANA: Fisaorana ho an’ny vahoaka Malagasy.
Tontosa soa aman-tsara ny fotoan-dehibe nilazako ny firotsahan-kofidiana ho filoham-pirenena. Fotoan-dehibe izay natao tetsy amin’ny Hotel Suc De La Ruche Ankadikely ny alarobia 28 Febroary 2018 lasa teo. Manoloana izany indrindra, maneho fisaorana mitafotafo ny vahoaka Malagasy rehetra ny tenako. Tonga maro be ianareo, na ny avy eto Antananarivo eny fan a ny avy any amin’ny faritra. Fotoana izay nanoloran’ny antoko “maeva” ahy ho kandida filohan’ny Repoblika amin’ity 2018 ity. Manasa antsika rehetra hatrany hiroso lalindalina kokoa amin’ny fanoloran-tena sy fandraisana andraikitra eto amin’ny firenena. Ho taom-pandresena feno ny fiasan’Andriamanitra amin’ny toe-panahy sy toe-pontsika anie ity taona ity.
Miandradra fiovam-piainana ny vahoaka Malagasy ankehitriny. Fiovana amin’ny lafiny rehetra no takiana toy ny fampanjakana ny fahamarinana sy ny fahitsina ary ny fahendrena eo amin’ny fitantanana.
Sanatria hanao toy ny volan’ny kankafotra ka ny feo omaly tsy niova. Fa efa miharihary toy ny vay an-kandrina ny fahasahiranan’ny Malagasy.
Noho izany, aoka isika tsy hangatak’andro intsony. Sahia mijoro hanavotra ity Tanindrazantsika ity.
‘Ndao averina ny hasina maha-olona sy maha-Malagasy antsika.
‘Ndao hametraka fomba fisainana sy fomba fijery vaovao ka tena hampihatra tanteraka ny fahamarinana sy ny fahatahorana an’Andriamanitra eo amin’ny fitantanana ity firenena ity.
Ny olona rehetra dia mitovy eo anatrehan’ny lalàna. Tsy hisy intsony araka izany ny tombo sy ala.
Ajanona sy foanana tanteraka ny kolikoly eo amin’ny sehatra rehetra. Ity farany izay manimba ny fiaraha-monina malagasy ka mila resena.
Manomboka avy any ambony ka hatrany ifotony ny ady amin’ny kolikoly ary mino aho fa isika rehetra izao dia samy resy lahatra ny amin’izany ary samy vonona hiady amin’io fahavalo lehibe eto amin’ny firenentsika io.
Anisan’ny sakana goavana tsy mampandroso ny firenena ny tsy fisian’ny fandriam-pahalemana. Noho izany, dia atao laharam-pahamehana izany na an-drenivohitra na ambanivohitra. Tsy maintsy arovana araka izany ny ain’olona sy ny fananany na hoan’ny Malagasy na hoan’ny tera-tany vahiny. Tsy maintsy arovana ihany koa ireo mpampiasa vola mba ahafahan’izy ireo mampiasa ny volany eto amintsika.
Ankoatra izay, hisy ny fanavaozana na “réforme” eo anivon’ny mpitandro filaminana mba hanana anjara toerana mihoatra lavitra amin’ny fampivoarana ny toe-karena malagasy.
Maro ny asa sy ny fanatsarana tsy maintsy atao. Ireo voalaza ireo dia bango tokana ahitantsika ny toetra tokony hananana eo amin’ny fitantanana ny firenena.
Ny tenako dia hametraka an’i Jesosy Kristy Tompontsika ho Mpitarika ahy. Tsy hanavahana an’iza na iza anefa ny fiainam-pirenena. Miara-miasa amin’ny Malagasy rehetra tsy ankanavaka ny antoko “maeva”. Iray ihany ny vahoaka Malagasy ary hiasa hoan’ny rehetra ny tenako.
Ataontsika fianana ny mivavaka mialoha ny fivoriana sy ny asa rehetra. Hampitombo ny finoantsika sy ny fahavononantsika izany.
Apetraka ny fifanajana eo amin’ny fifandraisan’ny rehetra.
Malalaka kosa anefa ny tsirairay amin’ny finoana ananany sy ny fanehoan-kevitra.
Dia toy izay raha fitinina ny asa miandry antsika ary Ady goavana no atrehantsika. Tsy hiady irery anefa isika fa Jehovah no hiady ho antsika.
Ny teny faneva nofidintsika amin’izao fanomanana ny fotoam-pifidianana izao dia noraisina tao amin’ny Isaia 60:1 “Mitsangàna, mihazavà fa tonga ny fahazavanao”
Ny voninahitra dia ho an’Andriamanitra.
Masina ny firenena!
NY FILOHA NASIONALY ANTOKO POLITIKA « maeva »